Mpanamboatra sy mpamatsy insecticide famonoana bibikely ectoparasiticide | Senton
Cyromazine Ectoparasiticide bibikely
Fahombiazana haingana Famonoana bibikely Cyromazine entana dia an Mpanamboatra fitomboan'ny bibikely izay azo ampiasaina ho toy ny larvicides ho an'ny Fanaraha-maso ny lalitra.Famolavolana: Cyromazine 98% Tech, Cyromazine 1% Premix, Cyromazine 2% SG, Cyromazine 10% Premix, Cyromazine 50% SP, Cyromazine 50% WP, Cyromazine 75% SP, Cyromazine 75% WP.
fahadiovana: 98% Min.
Bika Aman 'endrika : Vovoka kristaly fotsy.
Teboka mitsonika: 224-2260C
Anarana simika: N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Sokajy vokatra: Fitomboan'ny bibikely mifehy ny réagent.
Formula Empirical: C6H10N6
Famonosana mahazatra: 25Kgs / amponga.
Cypermethrin bibikely famonoana bibikely dia fitomboan'ny bibikely miavaka mifehy ny réagent. Mety ho toy ny additive feed, izay afaka manakana ny fitomboan'ny bibikely amin'ny bibikely amin'ny ambaratongany. Ny fomba fiasan'ny singa mavitrika dia mifantina tsara, dia mety tsy hanisy ratsy ny bibikely vita amin'ny bibikely fa ny bibikely toy ny lalitra. Azo ampiasaina amin'ny karazan-tsaha rehetra io reagent io ho toy ny additive feed mba hifehezana ny fitomboan'ny lalitra.Famonoana bibikely Pyrethorid Cypermethrin manana ny mampiavaka ny fahombiazana, fiarovana, tsy misy poizina, tsy mandoto ny tontolo iainana, ary tsy mifanohitra amin'ny fanafody hafa. Noho izany, dia mety hifehezana amin'ny fomba mahery vaika ny fanoherana mahatohitra.Ny orinasanay dia orinasam-barotra iraisam-pirenena manana traikefa manan-karena.Raha afa-po amin'ny vokatray ianao, mifandraisa aminay, hanome anao vokatra sy serivisy kalitao izahay.
Mitady fanaraha-maso tsara ny mpamokatra sy mpamatsy Dipteran Larvae? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. RehetraFamonoan-tenaho an'ny Fly Control dia azo antoka ny kalitao. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina tao amin'ny zezika akoho. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Pest poizina Cypermethrin poizina famonoana bibikely
Thiamethoxam Vidiny ambany ambany
Chloride oxalyl tsara kalitao